ဇနီးလေးရဲ့ မွေးနေ့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း - Cele Gabar
ဇနီးလေးရဲ့ မွေးနေ့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ပိုင်ဇေရဲထွန်းကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အနပြညာအလုပ်တွေကို အနည်းအကျဉ်းသာပြုလုပ်နေခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကိုတော့ အခိုင်အမာဆက်လက်ရရှိနေစဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဧပြီလ (၂၅)ရက်နေ့လေးကတော့ ပိုင်ဇေရဲ့ထွန်ရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ဇင်သဲနိုင်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ နေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဇေရဲထွန်းကတော့ ဇနီးချောလေးရဲ့ မွေးနေ့အတွက် သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “ပြီးပြည့်စုံသောမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ အသဲလေး။ 25 .4. 2022. 12 am. မှစ၍ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း။ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီး စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါ၍ ဘာသာ သာသနာအကျိုး ဆတိုးသယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။
သဲလေးရဲ့ ဘဝလောကကြီးထဲမှာ နေ့ရက်ပေါင်း ၁၂၇၇၅. ရက်မှာ ဒီနေ့ထိ အေးအတူ ပူအမျှ ရက်ပေါင်း၆၁၇၄ ရက်ကို အတူတူကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြပြီးပြီ။ နောင်လာမဲ့နေ့ရက်ပေါင်းများစွာကိုလဲ lovely3J နဲ့အတူ ပျော်ရွင်စွာချီတက်ကြရအောင် ” ဆိုပြီး အချစ်များစွာဖြင့် မွေးနေ့ဆုတောင်းထားပေးခဲ့ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးတွေရော ဇင်သဲနိုင်ရဲ့ မွေးနေ့ကိုမွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
Source – Paing Zay Ye Tun
ဇနီးေလးရဲ႕ ေမြးေန႔ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအျပည့္နဲ႔ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့တဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္း
ပရိသတ္ႀကီးေရ ပိုင္ေဇရဲထြန္းကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္ တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အနျပညာအလုပ္ေတြကို အနည္းအက်ဥ္းသာျပဳလုပ္ေနခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကိုေတာ့ အခိုင္အမာဆက္လက္ရရွိေနစဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ ဧၿပီလ (၂၅)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပိုင္ေဇရဲ႕ထြန္ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္သူ ဇင္သဲႏိုင္ရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္က်ေရာက္တဲ့ ေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပိုင္ေဇရဲထြန္းကေတာ့ ဇနီးေခ်ာေလးရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကေန “ၿပီးျပည့္စုံေသာေမြးေန႔ေလးျဖစ္ပါေစ အသဲေလး။ 25 .4. 2022. 12 am. မွစ၍ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း။ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းတို႔နဲ႔ျပည့္စုံၿပီး စိတ္သြားတိုင္းကိုယ္ပါ၍ ဘာသာ သာသနာအက်ိဳး ဆတိုးသယ္ပိုးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေစ။
သဲေလးရဲ႕ ဘဝေလာကႀကီးထဲမွာ ေန႔ရက္ေပါင္း ၁၂၇၇၅. ရက္မွာ ဒီေန႔ထိ ေအးအတူ ပူအမွ် ရက္ေပါင္း၆၁၇၄ ရက္ကို အတူတူေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ေနာင္လာမဲ့ေန႔ရက္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလဲ lovely3J နဲ႔အတူ ေပ်ာ္႐ြင္စြာခ်ီတက္ၾကရေအာင္ ” ဆိုၿပီး အခ်စ္မ်ားစြာျဖင့္ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းထားေပးခဲ့ပါတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေတြေရာ ဇင္သဲႏိုင္ရဲ႕ ေမြးေန႔ကိုေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post ” Hackerက နေ့တိုင်းနီးပါး ကုတ်တွေနေ့စဥ်ပို့ကာ ​သူမအကောင့်ကိုhackနေတာ ၂လနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်”
Next post မိခင်ကြီးအတွက် ရည်စူးပြီး ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ